किन जन्मन्छन् जुम्ल्याहा ? - किन जन्मन्छन् जुम्ल्याहा ? -
किन जन्मन्छन् जुम्ल्याहा ?
एजेन्सी । समाजमा हामीले जुम्ल्याहा देखेका, भेटेका वा सुनेका छौं । यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक हो । जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिने मुख्य दुई कारण छन् ।
समाजमा हामीले जुम्ल्याहा देखेका, भेटेका वा सुनेका छौं । यो कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक हो । जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिने मुख्य दुई कारण छन् ।
प्रायः एउटा डिम्बाशयले महिनामा एउटामात्रै डिम्ब निष्कासन गर्छ । तर, कहिलेकाहीँ कुनै कारणले दुईवटा डिम्बको छुट्टाछुट्टै शुक्रकीटसँग मिलन भई दुईवटा बच्चा विकसित हुने गर्छन् । त्यस्ता बच्चा कहिले छोरा–छोरा, छोरी–छोरी वा छोरा–छोरीका रूपमा जन्मिएको पाइन्छ ।
दोस्रो कारणले हुने जुम्ल्याहा एउटै डिम्ब र शुक्रकीट मिलन भएर बनेको कोष फुटेर जति टुक्रा हुन्छ, त्यतिवटा बच्चा भएको पाइन्छ । त्यस्तो फुटाइ सात दिनभित्र भएमा जुम्ल्याहा बच्चा छुट्टाछुट्टै विकास हुन्छ । सात दिनभित्र त्यसो भएमा टाँसिएर जन्मने सम्भावना हुन्छ । यसरी जन्मने जुम्ल्याहा प्रायः एउटै लिंगका हुन्छन् भने उनीहरूको अनुहार पनि दुरुस्त देखिन्छ ।